FAQ - Ningbo WEDAC-Point of Sale Khombisa Co., Ltd
Enginakho kuphela ezinye izithombe ukubonisa, ungakwazi yini ukusinika ikhotheshini? Uma kungenjalo, yini enye kumelwe akufune?
Uxolo asikwazanga Quote esekelwe nje isithombe, okungenani sidinga nesilinganiso for isakhiwo, ukujiya kanye izinga ngalinye izimfuneko indaba, ubuningi edingekayo, incazelo ukusetshenziswa kwayo, futhi ulwazi umkhiqizo okumele ukuboniswa.
Enginakho indaba emfushane, ingabe kwanele?
Kulungile, kodwa sicela maka nolwazi oluhlobene njengoba kubekiwe ngangokunokwenzeka: nesilinganiso and explanation, thickness and quality requirements for the material, quantity required,the description for its usage, and the information of the product which need to be displayed.
Nginesifo design mqondo
Kulungile, kodwa sicela uqaphele nolwazi oluhlobene njengoba kubekiwe ngangokunokwenzeka: nesilinganiso, ukujiya kanye nezidingo izinga okuqukethwe okune-ukufaneleka, ubungako besikhathi edingekayo, incazelo ukusetshenziswa kwayo, futhi ulwazi umkhiqizo okumele ukuboniswa
Lokho kuzokwenza kube best, futhi uma imininingwane elandelayo izotholakala, kuyoba ephelele:
Umkhiqizo okumele ukuboniswa
wobuciko uma ikhona ilebula, faka ingcaca / iphepha, decal noma ukuphrinta sisetshenziswa.
Pantone inombolo umbala silkscreen zokunyathelisa.
Yini okufanele mina ukunikeza uma ngidinga ukubonisa ukuba egcizelele?
Sicela unikeze okulandelayo uma udinga ngezifiso ukubonisa iyunithi:
1. ubuningi mhlawumbe oda yakho kokuqala.
2. isethi ephelele imidwebo lobuchwepheshe kuyoba kangcono ikhotheshini yethu, ukukhiqizwa noma ekuqondeni izidingo zakho.
3. Uma ungenalo umdwebo lobuchwepheshe, umqondo (design) umdwebo umphumela (noma indaba emfushane) nge osayizi ezibucayi futhi incazelo kuyoba asebenzayo.
4. Imininingwane imikhiqizo yakho ukuba siboniswa ukubonisa iyunithi: noBujamo, usayizi, isisindo, impahla, ukucinga indikimba yendaba, njll, ngoba kudingeka ukuklama / ukuhlola isibonisi okusekelwe imininingwane imikhiqizo, onazo zonke amasampula imikhiqizo yakho kuzodingeka ukuhlola ukubonisa iyunithi ngaphambi sethula wena isampula sokugcina.
5. Uma isibonisi sakho isidingo zingabekwa emashalofini, sicela usinikeze imininingwane eshalofini: noBujamo, usayizi, imbobo indawo ngoba lwemidlalo, impahla, ukucinga indikimba yendaba, njll
Yiluphi ulwazi oludingekayo ukuze ikhotheshini, futhi yini ulwazi oludingekayo oluyisisekelo kumele kube etholakalayo ikhotheshini?
1. Sidinga nesilinganiso for isakhiwo ingxenye ngayinye ngayinye,
2. ukujiya kanye nezidingo izinga okuqukethwe okune,
4. Ukufaka imvelo nemininingwane
5. ubuningi edingekayo,
6. incazelo ukusetshenziswa kwayo, futhi ulwazi umkhiqizo okumele ukuboniswa.
7. imininingwane Ukupakisha
8. wobuciko uma ikhona ilebula, faka ingcaca / iphepha, decal noma ukuphrinta sisetshenziswa.
9. Customer ulwazi oluyisisekelo, contact
10. Inani eside
ngokushesha Ngingasithola kanjani intengo (nekhotheshini)?
1. imidwebo Uma ezinemininingwane zinikezwa, noma ulwazi oluningiliziwe konke etholakalayo kwikhotheshini , ngokuvamile esingayipha intengo zingakapheli izinsuku 2, sizonikeza ikhotheshini ngesinye ngokwendlela isimo langempela umsebenzi.
izinto eziningi noma izinto izinkinga kuthathe isikhathi kuqhathaniswa eside.
Intengo Basic (ngaphandle imininingwane nokupakisha, noma intengo ex-umsebenzi) kungaba umhlinzeki ngokushesha.
Qedela ikhotheshini (ngemininingwane nokupakisha, isisindo, isikhathi owayephambili isampula kanye ukukhiqizwa njll) kuzothatha isikhathi kuqhathaniswa eside.
2. Ulwazi ayiphelele, ikhotheshini zingenziwa ngaphandle imidwebo, quote ezinsukwini ezingu-3.
3. Udinga ukwenza design kuqala bese ukunikeza nekhotheshini, ngokuvamile kudinga 1 iviki ukunikeza kwikhotheshini . Ingabe ukunikeza ikhotheshini ngesinye ngokwendlela isimo langempela umsebenzi.
Yiziphi imikhiqizo main ungakwazi ukukhiqiza?
isibonisi Acrylic, ukubonisa ukuma, ukubonisa iKhabhinethi, ukubonisa yezimonyo, eshalofini pusher, imikhiqizo PC, imikhiqizo PETG njll
Yini enye unganikeza?
isibonisi Plastic, imikhiqizo Injection, PVC extrusion, PVC umnikazi, ukubonisa sokhuni, ukubonisa metal njll
Yini MOQ ka WEDAC ukukhiqizwa?
Sula isibonisi acrylic: 100pcs
Colorful isibonisi Acrylic: 500kgs
Uthayela isibonisi ukuma: 100pcs
Injected isibonisi plastic: 1000pcs
Yini evamile nokupakisha indlela imikhiqizo ehlukene?
1. nokupakisha Jikelele: 1pc / PE isikhwama / ibhokisi kwangaphakathi, eziningana PC / ibhokisi, noma PC eziningana ebhokisini kwangaphakathi ke N amabhokisi e ngaphatha ibhokisi elinezincwadi ..
2. nokupakisha Bulk: N PC e ngaphatha ibhokisi elinezincwadi, nabanye infilling.
3. Honeycomb ibhokisi, ikesi lokhuni, amacala sokhuni, igwebu umvikeli Pallets ngokhuni, Pallets plastic njll inketho.
Yini ongakhetha wenkokhelo WEDAC ukwamukela?
WEDAC lamukela inkokhelo ka ezilandelayo:
1. T / T 50% kusengaphambili njengoba idiphozi, kanye nokulinganisela emva ikhophi B / L.
2. LC at emehlweni
3. Okunye indlela yokukhokha ukuze kuxoxwe ngazo futhi esikalini njengoba ngamunye isimo enemininingwane.
isikhathi owayephambili isampula nokukhiqizwa kwezinto ngobuningi: Sample izinsuku 3-15, IMisa ukukhiqizwa izinsuku 15-50.
Idethi yokuphelelwa yisikhathi ikhotheshini: izinsuku Ngokuvamile ngaphakathi 30 kuphela.
YeSampuli ukuhlinzeka izindleko:
Inani ≤10 zamadola, mahhala, kodwa courier icala okumele ngumthengi.
Inani> 10 zamaRandi, Sample izindleko = unit price x 3 + courier icala okumele ngumthengi.
Uma umkhiqizo Udinga ukuvula isikhunta, isampula izindleko Udinga ukufaka izindleko isikhunta.
Umthengi angasebenzisa T / T, Paypal, entshonalanga union, moneygram, & nganoma iyiphi indlela ukwenza inkokhelo ukuze isampula izindleko.
Intengo yakho iphakeme:
Yebo, mhlawumbe intengo yethu ingaphezu kwe abanye kwabanye, ngoba thina ngeke usebenzise izinto noma ezinga eliphansi usike emakhoneni futhi ethubeni izimpahla engekho ezingeni, singelokothe ​​ukunciphisa izinga lomsebenzi wethu ukwehlisa izindleko umkhiqizo wethu, asifuni ukuba konakalisa emakethe yekhasimende bethu imikhiqizo ezimbi, sithemba iklayenti yethu futhi nathi angase bazuza ndawonye kusukela ibhizinisi mutual.
Ingabe intengo yakho ocashunwe kuxoxiswane noma kwanciphisa?
Yebo, impela, uma qty., Spec. noma imigomo nemibandela njll ngeke kushintshwe, noma ukuqonda okwanele mutual Kumiswa.
Kuthiwani isampula singemukelwa?
Sizokwenza alungise futhi ahlinzeke isampula entsha futhi mahhala.
Ngimbeké umyalo. Manje?
Sizokwenza ukukwazisa isimo sokukhiqiza izithombe kusukela embonini. Sizolandela inqubo ukukhiqizwa futhi ikhwalithi yomkhiqizo, ukuqinisekisa ukuthi yonke into ukuhlangabezana izinga yakho esezingeni, qinisekisa ukuthi akukho lutho olungalungile phambi izimpahla ushiye embonini yethu! ...... .futhi ungalindela ukuthola izimpahla ngaphambilini ngemva kwesikhathi ukukhiqizwa (ezishiwo oda) nokuthunyelwa isikhathi (ngemikhumbi noma emoyeni).
Ingabe ubuyekeze nathi isimo sokukhiqiza izithombe emva oda ibekwe?
Yebo, impela. Sizolandela inqubo ukukhiqizwa futhi sigcine wena zohlelo.
Wenzenjani ukulawula izinga lemikhiqizo?
Sinazo 3 QC, bona ahlole konke futhi nsuku zonke, njalo umkhiqizo uyoba sezingeni eliphansi zihlolwe ngaleso sikhathi esibucayi, ezifana, izinto ezasetshenziselwa, lulwimi umkhiqizo, umkhiqizo osuphelile, ukupakisha njll ..
Kuthiwani okuthumela zokuhamba ngezinto zomphakathi? Ingabe unayo okuthembekile lokuthumela ejenti noma forwarder?
Yebo esinalo okunokwethenjelwa lokuthumela ejenti & forwarder ngokusebenzisana nathi iminyaka eminingi, angahlala ukuletha izimpahla emathekwini yakho ngokuphepha.
Uma senza Fob, ingabe angamukela esiqokiwe forwarder?
Yebo, kodwa forwarder kudingeka zigunyazwe nathi phambi thina ukubhuka isikhala nabo, uma forwarder esimela okungaphezu kwamandla ethu noma sathola izinkinga nabo, sinelungelo ukucela ukushintsha ukuba esinye, noma ukuncoma onjalo ngawe.
Kuthiwani lokuthumela imibhalo?
Ngokuvamile siyofaka invoyisi, ukupakisha uhlu futhi i-invoyisi njengoba lokuthumela amadokhumenti, uma umthengi kudingeka nanoma yimiphi eminye imiqulu, sicela usazise kusenesikhathi.
Emva kokuthola izimpahla, uma umonakalo noma imikhiqizo onesici atholakala, yini okufanele siyenze?
Sicela uthathe izithombe bese uthumela kithi ngokushesha, sizokwenza esikhundleni salo e-mpahla esilandelayo.
Uma ngibeke uphinda oda, kungaba intengo ibe ngaphansi noma nje ugcine olufanayo ne-oda kuqala?
Sizobukeza intengo esekelwe izinga lokushintshisana lwemali futhi izindleko impahla / zabasebenzi ngemva kokuthola oda uphinda futhi enze ukulungiswa ngokufanele.
Ingabe imboni / umkhiqizi noma nje inkampani ukuhweba?
Singabantu umkhiqizi kodwa singenza zokuhweba uma kunesidingo.
Zingaki izisebenzi isiyonke inkampani yakho?
Kukhona uku 25 abasebenzi kule mboni.
Yini umthamo yakho ukukhiqiza?
Mayelana USD500000 ekukhiqizeni isibonisi okwamanje, kodwa singakwazi ukunweba ukukhiqizwa umthamo wethu ngokushesha.
Yini okwamanje yakho yokuthengisa umthamo?
USD3 Izigidi ngonyaka.
Kungani kufanele ukhethe ukuveza acrylic?
1. Phakathi Umhlaba Wall Ⅱ ka-1939-1945, njengoba plexiglass ekhethekile, acrylic ukuthi okokuqala kabanzi njengendlela somoya ezindiza impi futhi amathangi, ukuphila inkonzo yayo yayineminyaka engaphezu kuka-10 ngaphansi imvelo ezinzima.
2. Acrylic has ngezinga eliphezulu of obala, futhi izinga yokudlulisela ukukhanya isesikhathini 92-93% --- ephakeme kunaleyo ingilazi! Ngakho-ke has idumela "crystal plastic".
3. Ukukhanya zayo ubukeka ethambile, ukhululekile, brilliant (like diamond)!
4. It has esihle sezulu ukumelana, epically ongaphandle, simo phezulu in the plastic. Ukusebenza Okuhle Ukuthi izinga lokushisa eliphakeme, izinga lokushisa ukuhlanekezela emhlabeni 96 ℃ ( 1.18MPa ) . Okuhle sezulu ukumelana, ukumelana acid alikhali, kungekho mkhuba yellowing kanye hydrolysis ngemva kweminyaka ukuchayeka ngaphansi kwelanga nemvula.
ukuphila 5. ukusebenza Long: Uma kuqhathaniswa nezinye izinto (ezifana PS, AS, PP njll), ukuphila ukusebenza isikhathi eside ngemva kweminyaka emithathu!
6. Excellent anti-ukuguga ukusebenza emoyeni: izibonelo zalokho experiment ihlolwe ukuthi: emva kweminyaka 4 yokuguga zemvelo, , isisindo acrylic yomkhiqizo zemvelo, , ukushuba esisuka, futhi transmittance ukukhanya encishisiwe kancane zemvelo, , umbala obuyisa aphuzi kancane zemvelo, , crazing ukumelana ukunciphisa sobala, Nokho, anti-umthelela ukusebenza anda esikhundleni, kanye nezinye ukusebenza physic cishe akukho ushintsho!
7. It has ngezinga eliphezulu of ebusweni ubulukhuni futhi isicwebezelisi,
8. Kuye kakhulu & oluvelele bumbela ukusebenza, angase ezakhiwe ukushisa, futhi angase okwenziwa machining lokukhanda.
9. Acrylic ingenziwa ibe ezihlukahlukene bobunjwa kanye nemikhiqizo ezidingekayo. Isici esivelele ukuhlala izinga eliphakeme obala nge ngezinga eliphezulu of ukushuba.
10. Esilula, cheapness, kulula ukuba balolonge.
11. okokusebenza acrylic has engenakuqhathaniswa izinga eliphakeme ukugqama kanye izinzuzo ezilandelayo: ubunzima ezinhle, hhayi zilinyazwa kalula; kusakhandeka; it has ukuthungwa elithambile, kungekho abandayo kancane ebusika. It has imibala eminingi, ukuhlangana imfuneko ezahlukene. Imikhiqizo ezenziwe nge acrylic, akuzona enkulu kuphela, kodwa futhi kungagcini.
12. Imvelo friendly:
1) emisebeni bayo ufana ne skeleton ntu sika.
2) Ukusingathwa indaba engase kabusha ukuze iphinde isetshenziswe, kabusha kulula futhi elula.
3) High izinga kabusha, Qinisa ukuqwashisa kwemvelo ngokuya
4) Ayikho monomer enobungozi noma ukuhogela bayokhululwa.
5) Ukudla ukuphepha, akukho umonakalo emzimbeni womuntu.
13. Amandla kulondolozwa: degree Good yokudlulisela ukukhanya, kuze 92-93%, umfutho kancane ukukhanya
edingekayo, ekunciphiseni izibani, okusindisa, ulondoloza amandla kanye nezindleko.
14. Namandla umthelela ukumelana, izikhathi eziyishumi nesithupha kuka ingilazi evamile, efanelekayo ukufakwa endaweni ephephile abanezidingo ezikhethekile.
15. Good wokuvimbela ukusebenza, ezifanele ezihlukahlukene zikagesi.
16. isisindo Khanyisa, isisindo kwesigamu ingilazi evamile.
17. Colorful, izinga eliphakeme ukugqama, engenakuqhathaniswa kwezinye izinto.
18. plasticity Namandla, udini lula.
19. Kulula silondoloze, kulula ukuhlanza, amanzi emvula can ngokwemvelo ahlanzekile.
20. ukuthungwa Soft, uzizwa hhayi abandayo ukuze ingilazi noma Ceramic ebusika.
21. Bright ngombala, ukuhlangabezana ukuphishekela ngazinye for izinga lempilo.
22. Ukusebenza Excellent for yokunyathelisa noma enamathela, uma esetshenziswa ukuphrinta efanelekayo noma sishaye enamathela ubuchwepheshe, lokho kungasho futhi imikhiqizo acrylic enhle ebusweni umhlobiso umphumela & kwezimiso nesimo sengqondo.
23. Ukukhuthazela Good, efana ne-aluminiyamu, ukuzinza obuhle amakhemikhali, singakhuthazela ukuguguleka izinto eziningi zamakhemikhali.
24. Fake Ukuvikelwa ukuba izibani zangaphakathi, ukunweba ukuphila inkonzo izibani.
25. ubekezeleleke nomlilo, khulula amandla omlilo okuvele self wokukucima.
26. Kukhona uku impahla acrylic esesikhundleni ukusebenza ezahlukene & amaningi, umbala ehlukahlukene visual effects, ungase nemfuneko ezihlukahlukene amakhasimende.
27. okunomthelela kakhulu ezibukwayo emva processing efanele, umhlobiso kanye zokunyathelisa.
Yiziphi umehluko phakathi ukuveza acrylic kanye nezinye izinto? Acrylic vs Glass
Ngo umkhakha, acrylic impahla has a isicelo ebanzi kuka ingilazi impahla, njengoba kunezinzuzo eziningi phezu ingilazi impahla.
1. isici ukucutshungulwa, acrylic zingahlukaniswa zibe amafomu okuningi nomumo kuka ingilazi.
2. Bobabili ethambile, impahla Nokho acrylic nezimo ezingaphezu kuka ingilazi. Lapho ingilazi amakhefu, ke sichitha zibe izicucu abukhali elimele kalula abantu; ngenkathi kuhlinzwa uqalisa enkulu, izingcezu esingagwegwesi, futhi ngeke ukulimaza abantu. Ngokuqhathanisa amabili impahla, omunye uthanda ayinangozi impahla acrylic.
3. Kokubili nokuphepha ephezulu ukudla grade, amakhemikhali ukuzinza zemvelo, , sikhuthazele ukuguguleka jikelele amakhemikhali, akuyona oncibilikayo ngamanzi.
4. Kubonakala ukukhanya permeation zemvelo, , UV zemvelo, , isisindo 1/2 ingilazi evamile.
5. permeation Ukukhanya 92-93% zemvelo, , abavamile plastic esobala (PS, AS, PVC njll) has permeation ukukhanya kancane ngaphezulu kuphela kuka-80%.
6. Anti-umthelela ukusebenza 12 ~ 18 izikhathi abavamile Silicon ingilazi.
7. umfutho Mechanical nakalula kuyizikhathi 10 kuka abavamile Silicon ingilazi zemvelo, , ubulukhuni efana aluminium zemvelo, , oluvelele sezulu ukumelana naso futhi kwenze ukumelana ukuguga.
8. sinesimo sengqondo Okuvelele enhle zemvelo, , ungumnikazi isicwebezelisi crystal-like emva wokucwebezelisa zemvelo, , i-alias "iNdlovukazi Plastic Crystal".
Differerence phakathi acrylic ukubonisa kanye PS injected ukubonisa:
1. ukuveza acrylic ubukeka esobala kakhudlwana futhi cute ngaphandle PS injected isibonisi yokubeka, futhi has a izinga eliphakeme ebusweni isicwebezelisi, ungumnikazi isicwebezelisi crystal-like emva wokucwebezelisa ,; ukusebenza Excellent for yokunyathelisa noma enamathela, uma esetshenziswa ukuphrinta efanelekayo noma sishaye enamathela workcraft, lokho kungasho futhi imikhiqizo acrylic enhle ebusweni umhlobiso umzamo & kwezimiso nesimo sengqondo. Ngakho-ke engenakuqhathaniswa indlela abheka ngayo izinto ngokuvelele enhle.
2. Acrylic has ukusebenza ekuphileni isikhathi eside kakhulu kuneminyaka PS, okungenani iminyaka emithathu eside ekuphileni inkonzo.
3. acrylic ukubonisa yokubeka ayidingi ukuvula isikhunta, ngaleyo ndlela ngaphandle kwenkokhiso isikhunta kuyokwenzeka, futhi ubukhulu bawo isakhiwo angase ngezifiso sizikhandle yisiphi isikhathi.
4. Nokho isibonisi acrylic iphezulu kakhulu iyunithi izindleko kuka PS injected isibonisi.
5. PS injected isibonisi yokubeka ishibhile e unit price, Nokho-ke kudingeka ukuvula isikhunta ekuqaleni futhi has a izindleko isikhunta ukukhokha ngaphezu kwalokho.
6. Acrylic has endurability Sinemandla ngaphansi imvelo ongaphandle, it has oluvelele sezulu ukumelana.
7. Acrylic Kuningi anti-UV ukusebenza, anti-ukuguga ukusebenza.
8. Zombili ethambile, ngokuhlaziya ngaphansi lokushisa ongaphakeme.
9. PS has umjovo ukusebenza okungcono, efanelekayo sokukhiqiza inqwaba. Small zincipha izinga zomkhiqizo, usayizi uzinzile.
10. PS ngemva kokuzibeka elangeni ngaphansi kwelanga, kulula ukuze ujike aphuzi futhi ukufiphala.
2. Acrylic has ukusebenza ekuphileni isikhathi eside kakhulu kuneminyaka PP, okungenani iminyaka emithathu eside ekuphileni isevisi
4. Nokho isibonisi acrylic iphezulu kakhulu iyunithi izindleko kuka PP injected isibonisi.
5. PP injected isibonisi yokubeka ishibhile e unit price, Nokho-ke kudingeka ukuvula isikhunta ekuqaleni futhi has a izindleko isikhunta ukukhokha ngaphezu kwalokho.
6. PP uthambile, njengoba donsile kanzima njengoba acrylic.
obala 7. PP asikwazi ziqhathaniswa arylic.
8. Acrylic has endurability Sinemandla ngaphansi imvelo ongaphandle, it has oluvelele sezulu ukumelana.
9. Acrylic Kuningi anti-UV ukusebenza, anti-ukuguga ukusebenza.
Isibonisi acrylic ubukeka esobala kakhudlwana futhi cute ngaphandle PETG yokubeka, futhi has a izinga eliphakeme ebusweni isicwebezelisi, ungumnikazi isicwebezelisi crystal-like emva wokucwebezelisa ,; ukusebenza Excellent for yokunyathelisa noma enamathela, uma esetshenziswa ukuphrinta efanelekayo noma sishaye enamathela workcraft, lokho kungasho futhi imikhiqizo acrylic enhle ebusweni umhlobiso umphumela. Ngakho-ke has sinesimo sengqondo esingafani nalutho & ngokuvelele enhle.
PETG ' s anti-umthelela ukusebenza izikhathi 1-3 of acrylic waqinisa , futhi 3 ~ 10 izikhathi acrylic abavamile. PETG: Hard, anti-umthelela, futhi kungagcini, ngisho ngaphansi imvelo lokushisa esingaphansi -40 ℃ . PETG imikhiqizo babe endurability anele fabricatio n, ezokuthutha kanye ukusetshenziswa. Kungaba ukugwema ukwephula ngempumelelo.
PETG has enhle kakhulu ukusebenza obumba, kungekho esimhlophe emva eguqa ngaphansi lokushisa evamile, akukho esimhlophe emva ukugoba abandayo, akukho ufa, lula ukunyathelisa futhi umhlobiso.
PETG kulula ukukhiqiza imikhiqizo isakhiwo sibe yinkimbinkimbi futhi eside ngilulekela.
PETG umlilo nemithi, it ingeyona ezivuthayo, futhi akusizi evutha njalo, 'azivumelanise lizinga zokwakha, akukho enobungozi ekhiqizwa emva evutha, ephephile ezingaphezu kuka acrylic.
Anti-UV, angase kabanzi signages ongaphandle noma zasendlini,-Point of Sale, Khombisa Rack, imishini Outdoor, yokuthengisa idokodo, iphaneli lokuvikela Equipments, play esiteshini iphaneli, Vending umshini iphaneli njll
Kuyinto imvelo Thermoplastic umkhiqizo friendly, hhayi equkethe nezinye izakhi zamakhemikhali ngaphandle C, H, O, kuba uhlobo plastic okuyinto awaboli. Imikhiqizo ezenziwe le nto emva abalahliwe, beyophendulelwa emanzini ne-carbon dioxide, Ingase futhi kube khona kuvuselela kabusha ngaphandle ungcolisa imvelo.
PETG kuyabiza ngaphezu acrylic, kepha ezishibhile PC futhi iqine ezingaphezu kuka acrylic.
PETG isilandela indinganiso ukudla contact FDA, lingasuswa isicelo ukudla, imikhiqizo yezokwelapha njll, ingasetshenziswa njengoba emasakeni impahla noma iziqukathi ezihlukahlukene ukudla ...... futhi lapho abashadile bekhuthazela lipids futhi eziningi amakhemikhali, amelana ukuguguleka acid, ane-alikhali futhi amafutha njll, kuthathwa njengendlela material iphephe kuwo ukudla abantu.
PETG iye kabanzi amabhodlela Iphunga and zamabhodlela yayo, amabhodlela yezimonyo in kanye zamabhodlela yayo, amashubhu of lipstics, amabhokisi yezimonyo, deodorizer iziqukathi, umntwana powder amabhodlela, ezambiwa ofeleba, njll futhi PETG imikhiqizo umjovo: izihlungi, tube eustachian, isixhumi amapayipi , amaphampu izinzipho, futhi isebenzisa umshini wezinso Equipments njll imikhiqizo yaseNdlunkulu ezifana izinkomishi, isaladi isitsha, saltcellar, pepper shaker, ikhadi lasebhange, iziqukathi amanzi njll, okuyinto kudingeka okusezingeni eliphezulu izidingo ephephile kubantu.
1. PVC kuyinto ethambile, kushibhile futhi ngokuvamile ohlabayo.
2. esobala PVC ukujiya ngokuvamile akuyona ezingaphezu kuka 3mm.
obala 3. PVC asikwazi ziqhathaniswa arylic.
4. PVC akuyona ukudla okuphephile, hhayi imvelo ezinobungane.
5. PVC ngokuvamile isetshenziswa kanye izakhiwo acrylic njengengxenye isibonisi.
Nhlobo differerent zonke izinto: umbono, obala, ukuthungwa njll
Acrylic vs Izinkuni
Ezahlukene ezicini eziningi, kodwa ikakhulukazi acrylic kuyinto kwagezi, imvelo zokuzivikela, Nokho ukhuni uzodinga sonakalise indalo.
Acrylic vs Ishidi metal
Umehluko ikakhulu selivela obala, indlela abheka ngayo izinto, ukuqina nokuqina.
Acrylic vs bobumba
Ukuqhathanisa bendabuko impahla ngobumba, acrylic has engenakuqhathaniswa isicwebezelisi high, futhi ine izinzuzo ezilandelayo: Ukuzivumelanisa nezimo Good, hhayi kalula Breakable, kulula lilungiswe, sebenzisa kuphela Foam ezithambile nge kancane wokuxubha, ungase uhlanze enelanga ukwenzela bona kube fresh.
ukuthungwa Soft, singacabangi ukuthi abandayo ebusika.
Bright ngombala, bangahlangana ezahlukene ukuphishekela komuntu ngamunye ekuphileni izinga.
Imvelo friendly, kungcono emisebeni iyafana skeleton ntu sika.
Yiziphi umehluko phakathi isibonisi ethe futhi ukubonisa injected?
isibonisi ethe njo ayidingi ukuvula isikhutha, futhi isimo sawo futhi ukumisa angase egcizelele njalo ngaphandle kwendibilishi, ngaleyo ndlela-ke ngeke umsindise omningi isikhunta izindleko Ngokuqhathanisa nabathandekayo injected, futhi ethe njo ukubonisa indlela abheka ngayo izinto zalo ezinhle efakiwe Ngokuqhathanisa nge injected abathandekayo. Lapho abantu abafuni ukutshala izindleko isikhunta, noma umkhiqizo asifanele umjovo, noma abantu abafuni ukukhiqiza kwabaningi ubukhulu for imodeli, noma abantu ufuna ukuzama emakethe ngomklamo omusha, ethe njo acrylic isibonisi kuyoba lesikahle. imikhiqizo injected Udinga abathengi ukutshala izindleko isikhunta noma umyalelo ukukhiqizwa ubuningi omkhulu, futhi uma kuvulwa isikhunta model umuntu waqala, alikwazi ukushintshwa noma ushintshe isikhathi eside. Uma ufuna ukuba omunye oyisibonelo "okungcono" design, kuzodingeka ukuvula isikhunta entsha futhi noma asebenzise ethe njo bumbela acrylic.
Ingabe ethe njo isibonisi uqine ngokwanele?
Yebo, uma ungenawo abaphonse noma ume phezu kwawo, noma sebenzisa isibonisi acrylic ukubamba izinsimbi amabhlogo.
Yini izici eziyinhloko kanye nezinzuzo ethe njo acrylic ukubonisa?
isibonisi ethe njo ayidingi ukuvula isikhutha, futhi isimo sawo futhi ukumisa angase egcizelele njalo ngaphandle kwendibilishi, ngaleyo ndlela-ke ngeke umsindise omningi isikhunta izindleko Ngokuqhathanisa nabathandekayo injected, futhi ethe njo ukubonisa indlela abheka ngayo izinto zalo ezinhle efakiwe Ngokuqhathanisa nge injected abathandekayo. Lapho abantu abafuni ukutshala izindleko isikhunta, noma umkhiqizo asifanele umjovo, noma abantu abafuni ukukhiqiza kwabaningi ubukhulu for imodeli, noma abantu ufuna ukuzama emakethe ngomklamo omusha, ethe njo acrylic isibonisi kuyoba lesikahle.
Kuthiwani uhlelo lwakho ukuthuthukiswa esikhathini esizayo esiseduze?
Sizokwenza ukuthuthukisa eziningi uchungechunge acrylic ekhombisa (iningi nabo pusher uhlelo, futhi nabanye nezinye izinto ezifana MDF, PC, PETG, ishidi njll metal) kolayini ezahlukene, ezifana izimonyo, imithi & bezempilo imikhiqizo, e-ugwayi, iziphuzo & uphuzo, ukudliwa nsuku zonke & izimpahla zasendlini nokunye, ukusetshenziswa merchandising, isampula ukubonisa, yokuthengisa ukukhuthazwa njll
Sizokwenza khona Globalshop 2015 e-Las Vegas-US ngesikhathi Mashi 24-26 th 2015.
Kunjani inqubo workcraft:
Design noma ukudweba kuhlaziywe → Izinto Ukuthenga → Laser ukusika → Milling → wokucwebezelisa → ukushisa eguqa → Usilika wokunyathelisa kwesikrini → gluing → ukuhlangana → ukuhlolwa → ukupakisha → mpahla
Yini Isisetshenziswa sakho esikhulu?
Laser ahlabayo umshini 5
esinejubane router 2
Diamond ezipholisha umshini 1
Uthi lokuphotha yasungula umshini wokugaya 1
Flame ezipholisha umshini 2
Ithebula wabona 2
Ithebula lokuqopha umshini 1
Precision Omiswe umshini 1
Heat ukugoba umshini 4
Ultrasonic Welding umshini 1
Ingabe ukwanelisa ekhombisa nganoma yisiphi brand omhlaba?
Yebo, Loreal, Kaufland, Rimmel, uSally Hanson, Napolean Perdis, K-Mart, Big-W, Watsons, Evergreen njll
Ingabe unayo umnyango QC?
Yebo, sinobufakazi umnyango QC, 3 QC.
Ingabe uke umnyango R & D?
Yebo, sinobufakazi R & D umnyango, 3 abaklami.
Ingabe ukunikeza ODM imikhiqizo?
Yebo, siba imikhiqizo okuningi ODM. Nyanga zonke siyohlakulela okungenani 2-3 imikhiqizo emisha kanye nomklamo omusha.
Sicela asondele yokuthengisa ithimba lethu bese ubacela ngqo nge-imeyili, Skype , or telephones!
Bayokunika impendulo ngokushesha bese okhokhelwayo!